နေရာတိုင်းမှာပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောဆွီဒင်လူငယ်များ၏အတွေးများနှင့်ထင်မြင်ချက်များ (၂၀၀၆) - Your Brain On Porn
မှတ်ချက်များ။ ။ စိတ် ၀ င်စားစရာစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများအားညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြရန်မှာ“ သိပ္ပံပညာ” ဖြစ်သည်။ သို့သော်သောင်းနှင့်ချီသောအမည်မသိညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသုံးစွဲသူများ၏မှတ်ချက်များကိုကြည့်ရှုရန်မှာ ၀ င်ရောက်ခွင့်မရသည့်သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။
Scand J ကိုဂရုစိုကျသိပ္ပံ။ 2006 Dec;20(4):386-93.
Häggström-Nordin E ကို, Sandberg J ကို, Hanson ဦး, Tydén T က.
ဂရုစိုကျနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဌာန, Mälardalenတက္ကသိုလ်, Västerås, ဆွီဒင်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ညစ်ညမ်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိအရှိဆုံးဆည်းကပ်-ပြီးနောက်အကြောင်းအရာများတဦးဖြစ်ပြီး, ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အပါအဝင်မည်သူမဆိုများအတွက်လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ပါသည်။ လူငယ်စင်တာများမှာသူနာပြု-ဝမ်းဆွဲလူငယ်များလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအမျိုးမျိုးရှိသည်သတိပြုမိပါပွီ။
ဆယ်ပါးငယ်ရွယ်အမျိုးသမီးများနှင့်လူရှစ်ယောက်, အသက် 16-23 နှစ်ပါဝင်ခဲ့။ နက်နက်နဲနဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောပွင့်လင်းသောမေးခွန်းများကိုလည်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးများကိုတိပ်ခွေဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပြီးကူးယူရေးသားထားသည်။ ဒေတာကို grounded သီအိုရီအရသိရသည်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်လိင်ဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများလုပ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုမည်သို့ဖန်တီးခဲ့ပုံကို 'လက်ရှိလိင်မှုကိစ္စစံနှုန်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်း' ၏အဓိကအမျိုးအစားကဖော်ပြသည်။
အဆိုပါသတင်းပေးညစ်ညမ်းဆီသို့ဦးတည်ဆန့်ကျင်ခံစားချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်လိင်ရငျးနှီးကွဲကွာနေခဲ့ခံစားခဲ့ရ။ တစ်ဦးကကိုယ်ကျင့်တရားသဘောထားကိုဖော်ပြထားခဲ့သည်နှင့်အကျပုံစံကျားမအခန်းကဏ္ဍဥပမာပေးထားခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစံနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်, သတင်းပေးညစ်ညမ်း, အမည်ရလစ်ဘရယ်, Normal, အကွာအဝေး, အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်ရှေးရိုးစွဲမှကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးချင်းစီကိုင်တွယ်မဟာဗျူဟာများနှင့်သဘောထားများရှိခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှု၏ကန့်သတ်ချက်များသည်နမူနာအရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအရည်အသွေးဆိုင်ရာသုတေသနလေ့လာမှုတစ်ခုမှရလဒ်များကိုယေဘူယျအားဖြင့်မရရှိနိုင်ပါ။ ရလဒ်များသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်လူငယ်များ၏အတွေးများ၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့်လိင်အပြုအမူများကိုမည်သို့လွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ဤအချက်ကလူငယ်စင်တာများနှင့်ကျောင်းများရှိ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လူငယ်များနှင့်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းပုံများကိုလိင်ဆိုင်ရာပုံဖော်ပုံကိုဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးပုံကိုဖော်ပြသည်။